Amaphepha okwenza ukunikezelwa kwi-intanethi, ngaba ujonge umvelisi onikezela? | Iindaba zeGajethi
Ngaba ujonge iphepha lokwenza izipho? Ngaba ukhe wafuna ukuqhuba unikezele kwaye awunawo amaphepha amancinci esandleni? Oku kunye nezinye iimeko ezimbalwa zinokwenzeka kuthi nangawuphi na umzuzu, la "maphetshana" ebaluleke kakhulu apho kuya kufuneka sibeke amagama abantu abohlukeneyo abanokuthi bathathe inxaxheba kuraffle ukuze bazuze ibhaso.
Kolu hlobo lwamatyala sicebisa ukusebenzisa isicelo sewebhu esinomdla, esinegama likaFlucky kwaye leliphi endaweni yamanqaku amancinci ancangathi, uya kusebenzisa iilebheli ezimbalwa ezinemibala Apho kuyakufuneka sibhale amagama abathathi-nxaxheba kwidrowa. Ekugqibeleni ngu Umvelisi onikezela esinokuthi ngalo senze igama ukuba lizobe ngokulula nangokukhawuleza.
1 Uluququzelela njani umzobo nge-roulette ekwi-Intanethi kuFlucky
1.1 Njani kwaye kutheni ukwenza igama elinikiweyo
2 Amaphepha okwenza izipho
2.3 Yiphose kwithamsanqa
Uluququzelela njani umzobo nge-roulette ekwi-Intanethi kuFlucky
Kuqala kufuneka ubhekise ngakuyo Flucky iwebhusayithi esemthethweni, ekufumaneni kwimeko yokuqala ngonxibelelwano olucocekileyo ngokupheleleyo. Ukuya ngasekunene kwicala elingaphezulu lewindows, uya kufumana isithethi esincinci, onokuthi usithule xa umculo wangemva uxinzelelo kuwe. Ecaleni kwale icon kukho enye encinci ekubume be «i», ethi izame ukunika ulwazi malunga nokuba kufuneka usebenze njani ngesixhobo esincinci, into engazukufuneka njengoko siza kuyikhathalela ngeli xesha .
Emazantsi kwesikrini sokwamkela kukho iqhosha elincinci elithi «Qala«, Ekufuneka ucinezele kuwo ukuze umdlalo uqale kwangoko nangoko.
Ngokucinezela eli qhosha lincinci, ujongano lweFlucky kwiwindow yesikhangeli luya kutshintsha kancinane, njengoko ibar yecala iya kudityaniswa ngokuzenzekelayo kwicala lasekhohlo. Apho uyakufumana indawo encinci enomyalezo «Yongeza Umntu" (nangona ngesiNgesi) Ikhatshwa liqhosha elibomvu elinophawu "+". Apha kufuneka ufake igama lomthathi-nxaxheba ngamnye kwaye ucofe iqhosha u "Ngena" okanye ukhethe nje iqhosha elibomvu (ngophawu "+")
Ngokukhawuleza igama olibekileyo liya kuvela ezantsi kwakweli cala linye kodwa ngombala othile. Kwicala lasekunene, endaweni yoko, kuya kuvela isangqa, esiza kubakho roulette encinci ebonakalayo. Unokongeza amagama amaninzi njengoko ufuna kwibar kwicala lasekhohlo, kuxhomekeke kwinani labathathi-nxaxheba abaya kuba yinxalenye yalo mzobo nge roulette ebonakalayo.
Ukuthatha ukuba ungeze malunga namagama ali-10, onke aya kubonakala ngasekhohlo ngaphezulu kwebhokisi enombala othile; kwicala lasekunene endaweni yoko (isetyhula) i-roulette iya kuvela yahlulwe yangamacandelo ali-10, nganye inombala owahlukileyo. Le nxalenye yomdlalo kulula kakhulu ukuyichonga, kuba umbala ngamnye ofunyenwe kwivili uya kuba wegama ngalinye elibekwe kwicala lasekhohlo.
Nje ukuba sichaze amagama abo bonke abathathi-nxaxheba, ngoku kuya kufuneka ukhethe iqhosha elisezantsi elithi «Go«, Ke ibar enamagama iya kunyamalala okomzuzwana. Ngalo mzuzu kuya kuvela isandla esiya kuzama ukujikeleza eli vili.
Njengokuba besiphambi kwe roulette yokwenyani, kufuneka silinde le inyanisekileyo eye kaFlucky ukuba ime kumbala othile; xa oku kusenzeka embindini wefestile igama lomntu ophumeleleyo liya kuvela, iya kuba yeyombala apho le roulette ime khona.
I-Flucky sisicelo sewebhu esinomdla esinokuthi sisisebenzise ngexesha lokuzonwabisa kunye nabahlobo kunye nosapho, sikwazi ukunika naluphi na uhlobo lwento esinayo kwaye, yenza le roulette yona igqibe ukuba ngubani oza kwenza uhlobo oluthile lwesohlwayo. Ndiyabulela kwinto yokuba esi sicelo sewebhu sixhomekeke kuphela kwisikhangeli se-Intanethi, sinokuyiqhuba kulo naluphi na uhlobo lweqonga, oko kukuthi, kwiWindows, iLinux okanye iMac.
Njani kwaye kutheni ukwenza igama elinikiweyo
Ngexesha lokuqhuba i-raffle, kuxhomekeke ekubalulekeni kwayo, kunokwenzeka ukuba eyona nto sinokuyenza kukuya kwisicelo okanye kwinkonzo yewebhu esivumela ukuba senze olu hlobo lweraffle ngokungacwangciswanga ngaphandle kokuya emaphepheni ibhokisi enamagama abathathi-nxaxheba kunye namandla egqwetha Ukubandezeleka ngezinye izityholo.
Izipho zibe sisixhobo esihle xa sifuna sizazise kwiinethiwekhi zentlalo, ngakumbi xa sisandula ukwenza ishishini kwaye sifuna ukuqala ukugqibezela abathengi bethu. Ukongeza, ukubonakala phakathi kwabalandeli bethu kuyakonyuka njengoko siqhuba iirafuli, kuba enye yeemfuno ezinyanzelekileyo ekufuneka sizongezile kukuba yabelwe kuzo zonke iinethiwekhi zomsebenzisi ukuze inkampani okanye ishishini lethu lifikelele kwelona nani liphezulu labantu kunokwenzeka.
Ngethamsanqa kwi-intanethi sinokufumana inani elikhulu lezicelo kunye neenkonzo ezisivumela ukuba sizenze. Njengomgaqo ngokubanzi, ukusebenza kwazo zonke kulula kakhulu, kuba kuxhomekeke kudidi esilukhethileyo, kufuneka senziwe njalo faka amagama abo bonke abantu ababandakanyekayo ukuba umzobo uqale.
Amaphepha okwenza izipho
Zoba2 Isivumela ukuba singene kwinani labathathi-nxaxheba abaya kuba yinxalenye yerafuli kunye nenani lamabhaso esifuna ukuwaphatha. Umzekelo, ukuba sifuna ukubamba amabhaso amathathu phakathi kwabantu abali-10, isicelo siza kusibonisa kuphela amagama abantu abathathu kuphela abanethamsanqa ngokwaneleyo ukuba baphumelele. Singa yabelana ngeziphumo ngeFacebook, kuWhatsApp okanye ubapapashe kwiwebhusayithi yethu ngekhowudi ye-HTML esibonelela ngeziphumo. Olu hlobo lokusika lusimahla. Ukuba sifuna ukubonakalisa elubala kwimizobo, iSortea2 ikwasinika olo khetho ngee-euro ezingama-2,99.
Le webhusayithi yeyona inikezela okona kulungileyo kunye nokhetho uninzi xa kuziwa ekuqhubeni iirafi. Kwi IRandorium Singaqhuba i-sweepstakes ngeposi, Uluhlu lwabathathi-nxaxheba, ngamaqela okanye uluhlu lwamanani. Raffles nganye iyasivumela ukuba songeze umfanekiso wokuyilungisa, inani labathathi-nxaxheba, ubuncinci benani labathathi-nxaxheba kunye nenani lamaxabiso aza kuhanjiswa. Kuya kufuneka songeze inkcazo ephezulu yeeleta ezingama-400 zento esiyiqhubayo kunye neziseko ezifanayo kunye nomhla eyakwenziwa ngawo.
Sinokuseta umhla kunye nexesha lokutsalwa kuya kubanjwa. Nje ukuba songeze yonke idatha ehambelana nomzobo esiza kuwenza, cofa ekushicileleni umzobo. Iphepha lewebhu liza kusibonisa ikhowudi ye-HTML ukuba siyibandakanye kwiphepha lethu lewebhu. Nathi sinako ukwenjenjalo yabelana ngayo kwimidiya yoluntu ukuze abantu bathathe inxaxheba.
Eli phepha lisivumela ukuba siqhube i-raffle elula, enamagama abathathi-nxaxheba, siququzelele itonamenti ngamabhaso, siphose ingqekembe ukubona ukuba ngubani ophumeleleyo, thatha ikhadi, uqengqe idayisi ... Phakathi kwezinto onokukhetha kuzo iyasinika Yiphose kwithamsanqa, sinokufumanisa ukuba yeyabucala, phakathi kwabathathi-nxaxheba abaphambi kwekhompyuter okanye kulungile uyithumele kwiphepha lethu le-facebook. Nangona kuyinyani ukuba ukhetho lokwenza i-raffles luhluke kakhulu, zombini i-aesthetics kunye neziphumo ezisinika zona zisondele kakhulu.
Esi sixhobo sesinye sezona zigqibeleleyo esinokuzifumana kwi-intanethi, kuba iyasivumela ukuba senze ukhuphiswano lweevidiyo, iifoto, amabali kunye nokusivumela zidibanise kwi-Twitter, kuFacebook nakwiVimeo phakathi kwabanye. IiSocialtools Kusimahla ukuba awunabalandeli abangaphezu kwama-300, ke sisixhobo esifanelekileyo ukuba sifuna ukwenza uphawu lwethu lwaziwe kwaye sifumane inani elikhulu labalandeli.
I-Agorapulse sesona sixhobo silungileyo esinokusifumana ukukhuthaza ukusetyenziswa kweenethiwekhi zethu ngokudala iirafi kunye nokhuphiswano. Le nkonzo isinika amanani ngexesha lokwenyani Ukongeza ekusivumeleni ukuba sabelane ngeziphumo ngexesha lokwenyani kunye nokutsalwa okufanayo ukujonga ifuthe abanalo ngalo lonke ixesha. Imisebenzi ekhoyo yokuqhuba i-sweepstakes ku-Facebook naku-Twitter inexabiso elifikelelekayo, ke sinokuqala ukuyisebenzisa ngaphandle kokutyala imali eninzi.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Iindaba zeGajethi » ngokubanzi » software » Umvelisi wokunika
UMarcos Chourio sitsho
Ndiyithandile, yile nto bendiyikhangela, kodwa xa ndinika ukuqala kwakhona yonke into icinyiwe kwaye kuya kufuneka ndiqale ekuqaleni, andinakuqhubeka nokudlala ... Naziphi na iingcebiso? okanye i-roulette yokukhuphela okanye ukumilisela ikhowudi? Enkosi!
Phendula uMarcos Chourio
Ndiyavumelana nezimvo zangaphambili. Logama nje umntu engayicacisi, INYE USETYENZISWA KUPHELA. Ngokucinezela ukuqala kwakhona kuyasusa yonke into kwaye iqale ngaphezulu. Usizi lokuba aluniki ezinye iindlela zokhetho.
apho ithi "yabelana" kuya kufuneka ukope yonke i-url kwaye uyincamathisele kwisikhangeli kwaye iya kuvela njengoko injalo, ukuqala ukuphiwa, impumelelo
Molo, ndifuna ukwazi ukuba leliphi elona nani liphezulu labathathi-nxaxheba abaxhasayo. Ndizakwenza u-Facebook onike kwaye andazi ukuba bangaphi abantu abazakuthatha inxaxheba. Enkosi
I-Segway miniLITE kunye ne-miniPLUS, iimodeli ezintsha zothutho olukhawulezayo nolukhuselekileyo